FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
MANDULO phayaa, iinkundla zomthetho zelizwe laseNtshona zamkela ubungqina obungachananga obabambisa amadoda amabini awayetyholwa ngokubulala, zaza zawagwebela ukufa. Xa kwacacayo ukuba obu bungqina abuchananga, amagqwetha asebenza nzima ezama ukukhulula enye yala madoda. Kodwa awazange akwazi ukuyikhulula indoda yesibini kuba yayisele ibulewe.
Ngenxa yokuba okungekho sikweni kunokubakho kulo naliphi na icandelo lezomthetho, iBhayibhile iyabongoza: “Okusesikweni—okusesikweni uze ukusukele.” (Duteronomi 16:20) Xa abagwebi bewuthobela lo mthetho, abantu bayancedakala. UThixo wanika abagwebi boSirayeli wamandulo umthetho owawuza kubenza bangathathi cala baze bagwebe ngobulungisa. Makhe sijonge loo Mthetho ukuze sibone ukuba “zonke iindlela [zikaThixo] zisesikweni” kusini na.—Duteronomi 32:4.
ABAGWEBI ‘ABAZIZILUMKO, ABAZIINGQONDI NABANAMAVA’
Abantu bayancedakala xa abagwebi begweba ngokufanelekileyo nangokusesikweni. UMthetho uThixo awawunika amaSirayeli wawuyalela ukuba kukhethwe abagwebi abanjalo. Ekuqaleni kohambo olude lwasentlango, uMoses wayalelwa ukuba afune “amadoda afanelekileyo, amoyikayo uThixo, amadoda akholosekileyo, ayithiyileyo ingeniso yokungekho sikweni,” ukuze abe ngabagwebi. (Eksodus 18:21, 22) Kwiminyaka eyi-40 emva koko, waphinda wagxininisa imfuneko ‘yamadoda azizilumko, aziingqondi nanamava.’—Duteronomi 1:13-17.
Kumakhulu eminyaka kamva, uKumkani uYehoshafati * wakwaYuda wacebisa abagwebi wathi: “Kulumkeleni oko nikwenzayo, ngenxa yokuba anigwebi ngenxa yomntu kodwa kungenxa kaYehova; yaye unani ke kumbandela wokugweba. Ke kaloku vumelani ukunkwantya kuYehova kube kuni. Lumkani nize nithabathe inyathelo, kuba uYehova uThixo wethu akanantswela-bulungisa nakukhetha buso okanye kuthabatha sinyobo.” (2 Kronike 19:6, 7) Lo kumkani wayebakhumbuza abagwebi ukuba xa izigqibo zabo zibonisa ukuthabatha icala, uThixo wayeya kuliphosa kubo ityala lengozi eyehlayo.
Xa abagwebi bakwaSirayeli bethobela loo mithetho iphakamileyo, isizwe sasiziva sinqabisekile yaye sikhuselekile. Kodwa uMthetho kaThixo wawukwanemigaqo eyayinceda abagwebi benze izigqibo zobulungisa, nkqu nakumatyala anzima. Yeyiphi eminye yaloo migaqo?
IMIGAQO EYAYIKHOKELELA KWIZIGQIBO ZOBULUNGISA
Nakubeni kwakukhethwa abagwebi ababenobulumko nababefaneleka, kwakungafuneki bathembele kubuchule babo. UYehova uThixo wayebanike imigaqo okanye imithetho eyayiza kubanceda bagwebe kakuhle. Nantsi eminye imigaqo eyanikwa abagwebi bakwaSirayeli.
Phanda ngokucokisekileyo. Esebenzisa uMoses, uThixo wayalela abagwebi bakwaSirayeli wathi: “Xa nilamla phakathi kwabazalwana benu, nize nigwebe ngobulungisa.” (Duteronomi 1:16) Abagwebi banokugweba ngobulungisa kuphela xa besazi yonke into ngetyala. Ngenxa yoko uThixo wayalela abo bagwebayo wathi: “Uze uphande, uhlolisise, ubuzise ngokucokisekileyo.” Abagwebi enkundleni babefanele baqiniseke ukuba isityholo sommangalelwa ‘siyinyaniso’ ngaphambi kokuwisa isigwebo.—Duteronomi 13:14; 17:4.
Makubekho ubungqina. Into ethethwe ngamangqina yayibalulekile xa kuphandwa. UMthetho kaThixo wawusithi: “Ze kungesuki kuwe ngqina linye ngenxa yaso nasiphi na isiphoso okanye nasiphi na isono somntu, nokuba sisiphi na isono asenzileyo. Lifanele ilizwi limiswe ngomlomo wamangqina amabini okanye ngomlomo wamangqina amathathu.” (Duteronomi 19:15) Kumangqina lawo, uMthetho kaThixo wawusithi: “Uze ungayithabathi ingxelo yobuxoki. Ungasebenzisani nongendawo ngokuthi ube lingqina lobubi.”—Eksodus 23:1.
Kulindeleke ukuba amangqina athethe inyaniso. Ukuxoka enkundleni kwakunesohlwayo esiqatha esisesi: “Bamele baphandisise ngokucokisekileyo abagwebi, yaye ukuba ingqina elo lilingqina lobuxoki kwaye lizise isimangalo sobuxoki ngomzalwana walo, nize nenze kulo kanye njengoko belicebe ukwenza ngako kumzalwana walo, nibususe ke ububi phakathi kwenu.” (Duteronomi 19:18, 19) Ngoko ukuba umntu uxokisa inkundla ukuze afumane ilifa lomnye, wayeza kohluthelwa elakhe. Ukuba uyixokisa ngenjongo yokuba kubulawe umntu ongenatyala, kwakuza kubulawa yena. Lo mgaqo wawukhuthaza ukuba kuthethwe inyaniso.
Gwebani ngokungenamkhethe. Emva kokuva bonke ubungqina, abagwebi babewisa isigwebo. Kwakubalulekile ukuba bakhumbule uMthetho kaThixo othi: “Uze ungamphathi ngomkhethe osweleyo, yaye ungakhethi ubuso besikhulu. Uze usigwebe ngokusesikweni isinxulumani sakho.” (Levitikus 19:15) Ngalo lonke ixesha, abagwebi babemele bagwebe ngokunyaniseka bengaqhathwa yimbonakalo yomntu okanye isikhundla akuso.
Le migaqo uThixo awayinika amaSirayeli kwiminyaka emininzi eyadlulayo, inokuba luncedo nakule mihla ezinkundleni. Xa ilandelwa, kungagwetywa ngokufanelekileyo.
Xa kulandelwa imigaqo kaThixo kungagwetywa ngokufanelekileyo
IMIPHUMO EMIHLE YOKUGWEBA NGOKUSESIKWENI
UMoses wabuza amaSirayeli wathi: “Luluphi na uhlanga olukhulu olunemimiselo nezigwebo zobulungisa njengalo mthetho wonke ndiwubekayo phambi kwenu namhlanje?” (Duteronomi 4:8) Enyanisweni, lwalungekho olunye ngaphandle kwamaSirayeli. Ngethuba lokulawula kukaKumkani uSolomon, ngoxa wayethobela imithetho kaYehova ebutsheni bakhe, abantu ‘babenqabisekile’ yaye beseluxolweni, “besidla kwaye besela benemihlali.”—1 Kumkani 4:20, 25.
Okubuhlungu kukuba, amaSirayeli kamva amshiya uThixo wawo. Esebenzisa umprofeti uYeremiya, uThixo wathi: ‘Khangela! Baligatyile ilizwi likaYehova, banabuphi na ke ubulumko?’ (Yeremiya 8:9) Ngenxa yoko iYerusalem yaba ‘sisixeko esinetyala legazi nesizele zizinto ezicekisekayo.’ Ekugqibeleni yatshatyalaliswa, yahlala ingenabantu iminyaka eyi-70.—Hezekile 22:2; Yeremiya 25:11.
Umprofeti uIsaya wayephila kwelona xesha lakha lalibi kwimbali yamaSirayeli. Ecinga ngexesha langaphambili, wathetha le nyaniso ngoYehova uThixo nangeMithetho yakhe: “Xa imigwebo yakho iziswa emhlabeni, ngokuqinisekileyo abemi belizwe elinemveliso baya kufunda ubulungisa.”—Isaya 26:9.
Kwamvuyisa uIsaya ukuphefumlelwa kwakhe ukuba aprofete ngokulawula kukaKumkani onguMesiya uYesu Kristu esithi: “Akayi kugweba ngayo nayiphi na imbonakalo nje esemehlweni akhe, engayi kohlwaya ngokwento nje eviwe ziindlebe zakhe. Uya kuzigweba izisweli ngobulungisa, abohlwaye ngokuthe tye abo balulamileyo bomhlaba.” (Isaya 11:3, 4) Elinjani lona ithemba elimangalisayo abanalo abo baza kulawulwa nguKumkani onguMesiya kuBukumkani bukaThixo!—Mateyu 6:10.
^ isiqe. 6 Igama elithi Yehoshafati lithetha ukuthi “uYehova nguMgwebi.”
Ngaba UMthetho KaThixo Wawukhuthaza Impindezelo?
Amazwi aseBhayibhileni athi “iliso ngeliso, izinyo ngezinyo” aye ababhida abantu abaninzi. (Eksodus 21:24) Abanye abantu bakholelwa ukuba la mazwi abonisa ukuba uThixo uyayikhuthaza impindezelo. Kodwa indlela abacinga ngayo iyaphikisana nomthetho kaThixo othi: “Uze ungaphindezeli okanye ube nenqala koonyana babantu bakowenu.” (Levitikus 19:18) Ngoko ke, athetha ukuthini amazwi akwiEksodus?
KwiEksodus 21:22 kuthethwa ngamadoda amabini alwayo ize enye yenzakalise umfazi omithiyo, aze azale ngaphambi kwexesha. Ukuba umama nosana lwakhe babesindile, umyeni wakhe wayengafanele aziphindezele. Kunoko, indoda emenzakalisileyo yayifanele ‘ihlawuliswe ngomonakalo lowo njengoko eya kubeka phezu kwayo umnini waloo mfazi, ibe yayimele ikunikele oko ngokomyalelo wabagwebi.’ Ngamany’ amazwi, abagwebi babeyalela le ndoda ukuba ihlawule umyeni womfazi emenzakalisileyo. Ukuba umfazi okanye umntwana lowo uyafa ngenxa yokwenzakala, aba bagwebi babeya kuyalela ukuba loo ndoda ibulawe.
Kule imeko, asiloxhoba, kodwa ngabagwebi ababesebenzisa umgaqo othi “umphefumlo ngomphefumlo, iliso ngeliso, izinyo ngezinyo . . . ” (Eksodus 21:23, 24) Loo mgaqo wawukhumbuza abagwebi ukuba isohlwayo sasimele silingane nomonakalo. Omnye umphengululi weBhayibhile uRichard Elliott Friedman uthi: “Eyona nto ithethwa ngulo mgaqo kukuba isohlwayo sasimele singabi ngaphezu komonakalo.”
Yintoni eyabangela abanye bacinga ukuba lo mgaqo wawusithi abantu mabaziphindezele? KuMateyu 5:38, 39 uYesu wathi: “Nivile ukuba kwathiwa, ‘Iliso ngeliso nezinyo ngezinyo.’ Ke mna, ndithi kuni: Musani ukumchasa lowo ungendawo; kodwa othe wakumpakaza esidleleni sakho sasekunene, mphethulele nesinye.” Kubonakala ukuba ngomhla kaYesu ezinye iinkokeli zonqulo zafakelela ‘umthetho wokuziphindezela’ kwizithethe zazo owawunika abantu imvume yokuziphindezela. Noko ke uYesu wayenza yacaca into yokuba le mfundiso yayingavisisani nalo mgaqo kaThixo.
“Zonke Iindlela Zakhe Zisesikweni”
Kutheni ukuba nokusesikweni kukaThixo kuthandeka?